फरक पहिरनमा यस्ती देखियिन दीपिका पादुकोण, भित्रीवस्त्र बाहिर लगाएको भन्दै आए यस्ता कमेन्ट —
यी हुन् सबै'भन्दा धनी अभि'नेता त’लब सुन्नु'भयो भने च’कित पर्नुहुन्छ ।
विवाह सक्किना साथ बेहुली'ले गरिन बेहुला संग ख'त्रा डान्स (भिडियो सहित हेर्नुहोस्)
फरक पहिरनमा यस्ती देखियिन दीपिका पादुकोण, भित्रीवस्त्र बाहिर लगाएको भन्दै आए यस्ता कमेन्ट
एजेन्सी -फरक पहिरनमा यस्ती देखियिन दीपिका पादुकोण, भित्रीवस्त्र बाहिर लगाएको भन्दै आए यस्ता कमेन्ट : बलियुड कि एकदमै चर्चीत सुन्दरी अभिनेत्री दिपिका पादुकोण हुन् ! उनि रणबिर सिंह कि श्रीमती हुन् ! केहि समय अगाडी रणबिर र दिपिका को धुमधाम संग बिवाह भएको थियो ! उनि भारत कि धेरै चर्चित अभिनेत्री हुन् !
सन् २००६ मा इन्द्रजीत लङ्केशको निर्देशनमा कन्नड फिल्म ऐश्वर्यबाट अभिनयमा प्रवेश गरेकी उनले हालसम्म धेरै फिल्म खेलिसकेकी छिन् । धेरैजसो उनको फिल्मको मात्र नभई फेसनको पनि चर्चा हुने गर्छ ।उनीे हरेक शो या कार्यक्रममा जाँदा फरक पहिरनमा जाने गर्छिन् । उनको पहिरनले नै धेरैलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यस्तै हालै उनी अनौठो पहिरनले चर्चामा आएकी छिन् । उनले जिन्स र हाइ हिल्स लगाएकी छिन् भने शर्ट पनि फरक शैलीबाट लगाएकी छिन् ।
उनले आफ्नो शर्टमाथि कोरसेट लगाएकी छिन् । यहि पहिरनले अभिनेत्री दीपिका अहिले चर्चामा आएकी छिन् । पहिरनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालभरी सकरात्मक र नकरात्मक प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । उनको यो नौलो लुकले धेरै अचम्म पर्दै कमेन्ट गरेका छन् । कमेन्टमा प्रयोगकर्ता लेख्छन् ‘यो रणवीर सिंहको असर हो । अर्काले लेख्छन् के हो भाइ, यो भित्री वस्त्र किन बाहिर लगाएको रु’।
2019-12-27 admin 0
यी हुन् नेपाल लाई माया गर्ने र नेपाल संग गहिरो नाता सम्बन्ध भएका बलियुड कलाकारहरु
काठमान्डौ : यी हुन् नेपाल लाई माया गर्ने र नेपाल संग गहिरो नाता सम्बन्ध भएका बलियुड...
काठमाडौँ । अहिले सा’माजिक स’ञ्जाल फेस’बुकमा विवाह लगत्तै बेहुला र बेहुली नाचेको भि’डियो भा’इरल भएको छ...